Mamorona tranga Mini iPad anao miaraka amin'ny LEGO | Vaovao IPhone
Avy amin'ny iPad Actualidad dia mamporisika anao izahay kojakoja isan-karazany ho fanomezana amin'ity Krismasy ity. Volana vitsivitsy lasa izay, Belkin sy LEGO dia niara-niasa hamorona a Raharaha LEGO ho an'ny iPhone 5 sy iPod Touch. Ankehitriny dia anjaran'ny iPad Mini. Fonon-kevitra tena ilaina ho an'ireo tia LEGO an-tapitrisany izay tia ny famoronana mihoatra ny zava-drehetra ary manangana izay rehetra azony eritreretina noho ny LEGO.
Belkin sy LEGO dia niara-niasa hamorona ny LEGO Builder Case Belkin Case ho an'ny iPad Mini, izay ahafahantsika mamoaka ny eritreritsika. Ny trano dia mamirapiratra sy maroloko vita amin'ny plastika mafy mahatohitra ny votra sy ny lavo, izay ahafahantsika manampy ireo sombin-javatra rehetra tianay hampifanarahana azy. Afaka manampy mosaika miloko isika, manampy kodiarana, mekanisma…. Izay rehetra azontsika eritreretina.
Ilay fonony miaraka amin'ny fonony eo aloha izay aforitra mba hanao asa fiasa mijery sarimihetsika sy horonan-tsary. Ity takona ity dia tena mitovy amin'ny Apple Smart Cover, ny fiasan'ny asany dia mitovy ihany.
Lego Builder Case dia natao arovy ny sisin'ny iPad Mini raha mamela fidirana mora amin'ny seranana, bokotra ary solomaso fakantsary. Azonao atao ny manitsy ny haavony, mampifandray ny headphones na mameno ny iPad tsy mila esorinao ilay tranga amin'ny fitaovana.
Ny raharaha Lego Builder dia mamela ampio faritra LEGO ofisialy mankany amin'ny iPad Mini anay.
Ny fonenana plastika mafy dia miaro azy amin'ny fikosehana, ratra ary lavo.
Sarona fisarihana mifangaro, izay manamora antsika ny fametrahana ny iPad Mini amin'ny joro fijery samy hafa na manoratra na mijery horonantsary na sarimihetsika.
Ny rakotra fampisehoana dia misy andriamby mamela ampodio sy vonoy ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fanokafana na fanidiana azy.
Easy access amin'ireo fifandraisana, bokotra ary fakan-tsary.
Fanazavana fanampiny - Fanomezana noely: tranga Mini iPad Retina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mamorona tranga Mini iPad anao miaraka amin'ny LEGO
CarrierPigeon, ovao ny anaran'ilay mpitatitra anao amin'ny alàlan'ity fanovana ity (Cydia)